(18+) Isle (2000) အချစ်ဟာ လူကိုစိတ္တဇဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ယုံမလား ရေပေါ်'တဲ'တွေဆီအပန်းဖြေမို့လာတဲ့ကောင်လေးကို လှေမောင်းတဲ့ကောင်မလေးကချစ်မိခဲ့ပါတယ်... အရူးအမူးကိုချစ်မိသွားတာပါ...ဒါဆိုရင်ခဏကအချစ်ဟာလူကိုစိတ္တဇဖြစ်သွားစေလားဆိုတာလေးကသက်ရောက်လို့လာပါပြီး...... အဲဒီမှာကောင်လေးရဲ့ချစ်သူကရောက်လာပြီး... ကောင်လေးနဲ့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုချစ်နေကြတာကို ဝန်တိုနေတဲ့လှေသမားမိန်းမက ကောင်လေးရဲ့ချစ်သူကိုဖမ်းချုပ်ပြီးလှောင်ထားလိုက်ပါတယ်....ဒါကလည်းသူကောင်လေးကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အတွက်ပါ....အချစ်ဆိုတာကလည်းလေထုထည်တစ်ခုလိုပါပဲ.. ဖမ်းယူကိုင်ဆုတ်လို့်မရပေမဲ့..သူမရှိရင်လည်း လူသားတွေမနေနိုင်ကြပြန်ဘူးလေ...ကြာလာတော့ အချစ်ကလူကိုစေလိုရာလုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်သေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်..ဒီဇတ်လမ်းကလည်းအဲ့လိုပါးပါးလေးပုတ်ပြထားတဲ့သဘောပါပဲ... ကဲဗျာ..ထုံးစံအတိုင်းညွန်းလွန်းပြန်ရင်လည်းဇတ်ရှိန်ပြတ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်...အညွန်းကိုဒီလောက်နဲ့ရပ်နားပြီး...Imdb7.1ထိရရှိထားတဲ့ကားလေးကို ဘယ်လိုပုံဖော်ထားလဲဆိုတာခံစားကြပါစို့လား...ထွက်တဲ့ စာဖိုင်ထဲက အကောင်းဆုံးဖြစ်တာနဲ့ ရွေးပြန်ထားပေးပေမယ့် လိုအပ်ချက်များရှိပါက နားလည်ပေးကြပါFile Size : 770 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 1hr 30 minute Format : Mp4 Genre : Drama,Thriller Encoder : Joker.phs Download And watch With Pcloud Link Full HD Download And watch Pcloud Link Small File Size (ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ John La Yaungပဲ ဖြစ်ပါတယ်)@joker
(18+) Isle (2000)
Apaba (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၉++ ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရတဲ့အခါ တွေဝေမှုတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမသွားပါနဲ့ မနက်ဖြန်ဆိုတာမရောက်သေးသ၍တွေးပြီးကြောက်နေစရာမလိုပါဘူး Rapperဖြစ်ချင်တဲ့ဒီကားလေးထဲကကောင်လေးက သူဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရတဲ့အခါ ပြန်ကြိုးစားခြင်းမရှိပဲ ပေတေစွာနေထိုင်ပြီး သူ့ဘဝသူရိုက်ချိုးနေသလိုပေါ့... လောကကြီးထဲမှာပူပင်မှုတွေကကိုယ်စီရှိနေရသလို နေ့စဉ်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းမနည်းမနောပါပဲ....အဲဒီပူပင်မှုတွေထဲက... ဒီနေရာမှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုချန်ထားပါရစေ အကယ်၍ သင်သိပ်ချစ်ရတဲ့သင့်ချစ်သူကိုသာရှုံးဆုံးသွားရရင် ....သင်ဘယ်လိုဘဝကိုဆက်မှာလဲ... အညွန်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြီး..ဇတ်လမ်း အပြည့်အဝကိုတော့ Screenပေါ်မှာခံစားကြပါစို့လား ပရိတ်သတ်ပေါင်းတို့ခများ Download And Watch With Pcloud (ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ John La Yaung ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
Apaba (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၉++
Undulant Fever (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၈+ ဒီတစ်ခါတော့ ဇာတ်လမ်းခပ်ခပ်အေးအေးလေးနဲ့ ဒီခေတ်ရဲ့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ...''ဒီတော့...မိမိရဲ့သမီးမိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့မိဘတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လို ဆို့နှစ်မှုတွေရှိနေမလဲ... တာဝန်မဲ့တဲ့ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ဥပေက္ခာတွေကိုခါးစီးပြီးခံနေရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဘယ်လိုရပ်တည်နိုင်မလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်တောင် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကားလေးက 18+လို့ပြောထားပေမဲ့ လိင်အသားပေးခန်းတွေကိုချည်းပဲရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ပဲ ဒီဘက်ခေတ် လူငယ်တွေမမှားသင့်တာမမှားရအောင် ပုံဖော်ထားတဲ့ဇတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Download And watch With Pcloud Link Full HD Download And watch Pcloud Link Small File Size (ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Dean ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
Undulant Fever (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး ၁၈+
Cabin Fever(2016) ဒီတစ်ခါတော့ စွန်းကြမ်းတဲ့ Horror/Thrill တကားနက် မိတ်ဆက်ပေးမယ် ကြမ်းလား မကြမ်းလားကတော့ ပိုစတာကြည့်သိမှာပါ :Pဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ကယ်ဘင် ဆိုတဲ့ နေရာကို သူငယ်ချင်း ၅ယောက် သွားလည်ရာမှ မပြန်လမ်းကို မြန်းသွားပုံကို ရိုက်ကူးပြထားပြီး Horro တို့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း Rating တော့ အတော်နည်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ ပုရိသအကြိုက်ကား မျိုးမို့ ကြောက်တာရယ် ဟွာရယ် ဆိုတဲ့ ရသ ၂မျိုးကို တပြိုင်နက် ခံစားရမှမို့ သိပ်လန်းမယ်ဆိုတာ တော့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် သူတို့က ၅ယောက်စုသွားတယ် ကွီးတို့က ၁၈ယောက် စုကြည့်ကြပေါ့ :P
IMDB: 3.7/10 3,239 votes
Erotic Ghost Story (1987) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+ အမျိုးတို့ ရေ drama တွေ Action တွေကြည့်နေရလို့ ငြီး ငွေ့ နေပြီထင် ပါရဲ့ ကဲ အခုတစ် ခါ တော့ 18+ လေးလုပ် လိုက် ကြစို့ဗျာ ဒီဇာတ် ကား လေးက တော့ ရမက် အလွန် ကြီးပြီး လူသားအသွင် ပြောင်းဖို့ကြိုးစား နေကြတဲ့ ဝံပုလွေညီမသုံး ယောက် နဲ့ စာကြိုးစားပြီးကိုယ့်ကျင့်တရားကြီးမားလှတဲ့ကျောင်းသား လေးတစ် ယောက် အ ကြောင်းဖြစ် ပါတယ် ကဲ အပြည့် အစုံကို ဇာတ်ခုံမှာရှုစားပါစို့လားခင်ဗျာ Download And Watch With Pcloud DVD Rip (ဘာသာပြန်သူကတော့ Nyan Lin Htet ဖြစ်ပြီး အညွန်းရေးသူကတော့ ရဲခန့်မင်းဖြစ်ပါတယ်)
[21+] Hotel Desire (2011) 18+ ဆိုရငျ နညျးနမှောစိုးလို့ 21+လို့ ရေးပါရစေ Erotic movie တကားအနနေဲ့ IMDb rating 5.8 ရဖို့ဆိုတာလညျးမလှယျကူလှပါဘူး ဇာတျလမျး အကဉျြးကတော့ ဟိုတယျဝနျထမျးလညျးဖွဈ သား တယောကျလညျးရှိပွီးတော့ ယောကျြားနဲ့လညျးကှဲနတေဲ့ အနျတိုနီရာဟာ အလုပျအပျေါမှာ အဆငျမပွမှေုတှေ ဖွဈလာခဲ့တယျ... အဲ့ဒီကနမှေ ဟိုတယျဝနျထမျး သူငယျခငျြးတယောကျက စိတျထှကျပေါကျအနနေဲ့ ဟိုတယျက ယောကျြားတယောကျယောကျနဲ့အိပျဖို့မွှောကျပေးလာတယျ သူငယျခငျြးရဲ့ မွှောကျပေးစကားနဲ့ ဟိုတယျမှာလာတညျးတဲ့ မငျးသား မကျြကနျးလေးတယောကျဟာတော့ အနျတိုနီရာရဲ့ တစာခံဖွဈသှားရပါတော့တယျ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈမယျဆိုတာကို ဇာတျကားပျေါမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုကွပါ။ ဇာတျဝငျခနျးတဈခြို့က CMမှာ အရငျက တငျဖူးတဲ့ Q Desireထကျကွမျးတာမို့ Ratingကို ၂၁++++ သတျမှတျထားတယျဆိုတာ သတိပွုစခေငျြပါတယျ။ File Size : 300 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 38 minute Format : Mp4 Genre : Drama, Romance Encoder : Joker.phs
IMDB: 5.8/10 2,390 votes
[21+] Hotel Desire (2011)
[18+]Flower and Snake (2004) Story: Tôyama,aweak-willed businessman, is in debt to the Yakuza; they also haveavideo of him bribingagovernment minister. To clear his debts, he agrees to let them drug and kidnap his wife Shizuko, Japan’s queen of the tango, and subject her to the proclivities ofa95-year-old voyeur, who’saYakuza boss. Afteramasked ball, Shizuko ...
[18+]Flower and Snake (2004)
[18+]A Good Day To Have An Affair (2007) ဒီကား လေးက ကို တော့..ညွန်းပြရမယ် ဆို..အိမ် ထောင် ရေးဇတ် လမ်းကိုရိုက် ကူးထားတဲ့ပုံစံ လေးပါ...သို့ ပေမဲ့ ...အိမ် ထောင် ရေးမှာ ဖောက် ပြန် တဲ့မိန်းမနှစ် ယောက် အ ကြောင်းကိုအသား ပေးရိုက် ကူးထားတာလို့ ပြောရင် ပိုမှန် ပါလိမ့် မယ် ..အဲဒီလို ဖောက် ပြန် လို့လဲ.. နောက် ဆုံးမှာသင် ခန်းစာအကြီးကြီးရသွားပုံကိုမြင် တွေ့ကြရဦးမှာဖြစ် ပါတယ် ဇတ် ကားက ၁၈+++ဆန် ပြီး သုံးထားတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ အိမ် ကမိသားစုနဲ့အတူကြည့် ဖို့မသင့်တဲ့အခန်းတွေပါဝင် တာမို့ ကိုယ့် ဟာကိုယ် ဆင် ပြေကြည့် ကြပါ အများကြီးညွန်း...
[18+] Purpose Of Reunion (2015) Dongchul ဟာ ဘားအ​သေး​စားတစ်​ခုကို စီမံခန့်​ခွဲ​နေသူတစ်​​ယောက်​။ သူဟာ အမြဲတမ်း ​ကျောင်းသား​ဟောင်း​တွေ့ဆုံပွဲ ကို စီစဉ်​ချင်​​နေသူပါ။ တစ်​​နေ့ကျ​တော့ သူ့ဘားကို ​သူငယ်​ချင်းမတစ်​​ယောက်​ ​ယောက်​လာပါတယ်​။ Yujinဆိုတဲ့ အဲ့သူငယ်​ချင်းမ​လေးဟာ ​ကျောင်းသား​ဟောင်း ​တွေ့ဆုံပွဲတို့ဘာတို့ လည်း သွား​လေ့သွားထ ရှိတဲ့လူမဟုတ်​ပါဘူး။ ဒီလိုဘားမှာ အမှတ်​မထင်​ ​တွေ့လိုက်​တဲ့အခါမှာ သံ​ယောဇဉ်​ လက်​ကျန်​​လေးနဲ့ ချစ်​ခြင်းတရား​တွေ ဖြစ်​​ပေါ်လာပြီး နယ်​​တွေကျွံကုန်​ကြပါ​တော့တယ်​။ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ လျှို့ဝှက်​ချက်​​တွေ မရှိ​တော့ဘဲ သံ​ယောဇဉ်​​တွေ တွယ်​သထက်​တွယ်​လာချိန်​မှာမှ Dongchulရဲ့ ဇနီးဟာ Dounchulဆီ​ရောက်​လာချိန်​မှာ​တော့ …. ဘယ်တွေ ဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာ CM ပရိသတ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှူလိုက်ကြပါဦး။ လိင်အသားပေး ဇာတ်ဝင်ခန်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားတာမို့ ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးသူများ မကြည့်သင့်သလို၊ မိသားစုနဲ့အတူလဲ မကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။File Size : 780 MB Quality : Blu ...
[18+] Purpose Of Reunion (2015)
Confessions: The Secret Of Machiko Matsuoko(2010) အခုတစ်လော ၁၈++ ဇာတ်ကားတွေ မတင်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီမို့ Adult Movie ပရိသတ်တွေအတွက် ဂျပန်ကား တစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်း အကြောင်းပြောရမယ်ဆို Machikoက Music သင်ပေးတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့ သူ့ အစ်မနဲ့ အတူ နေပါတယ်။ သူ့အစ်မ ခြေထောက်ကျိုးရတာက သူ့အပြစ်ကြောင့်လို့ ခံယူထားတာကြောင့် သူအစ်မက သူ့ကို ကျွန်လို သဘောထားဆက်ဆံတာတွေအကုန်လုံးကို သည်းခံရင်း နေထိုင်ခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုနဲ့ နေလာရင်း တစ်ရက်မှာတော့ စိတ်တွေ မွန်းကျပ်နေတဲ့ Machiko တစ်ယောက် ကျောင်းသား တစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန် မိပါတယ်။ သူတို့ ၂ယောက် ဖြစ်နေတာကို သူ့အစ်မ သိသွားတဲ့အခါ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ၊သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားက လျို့ဝှက်ချက်ကရော ဘာတွေ များ ဖြစ်နိူင်လဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရမှာပါ။ ဂျပန်ကားတွေ ထုံးစံအတိုင်း လိင်အသားပေး အခန်းတွေ ပါတာကြောင့် ...
[18+] Don’t Look Down (2008) ဒီဇာတျကားလေးကတော့ နညျးနညျးလေးတော့ ဆနျး တယျ လို့ ဆို ရမှာပါ။ ဆနျးတော့လညျး အညှနျး ကို ရေးမထိ လောကျ အောငျ ပါပဲ။ အဖေ နဲ့ သား ရဲ့ သံယောဇဉျ။ အဖေ ဖွဈသူ အပျေါသားတဈယောကျရဲ့ ခဈြခငျမှု။ ရုတျတရုတျ အဖကေို့ ဆုံးရှုံး လိုကျရတဲ့ အခါ ဖွမေဆညျနိုငျဖွဈရတဲ့ ခံစားမှု , စိတျခံစားမှု နဲ့ လိငျမှု, လူတဈယောကျမှာ လိငျမှုရေးရာ ဟာ ဘယျလောကျ အရေးပါတယျ ဆိုတာ ခပြွထားတဲ့ ဇာတျကား ကောငျး တဈကားပါ။ စိတျပညာ အကွောငျးအရာ လိငျမှုရေးရာ အကွောငျးအရာ တှကေိုပါ ခပျပါးပါး လေး ပညာပေးထားတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။အသကျအရှယျ ရလာတဲ့ အခြိနျ ယောကျြားတဈယောကျ ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှေ အမွငျ့ဆုံး ရောကျနတေဲ့ ...
IMDB: 6.0/10 2,547 votes
[18+] Don’t Look Down (2008)
[18+] Natalie (2010) နာတာလီ...... နာတာလီ ဟာ အလွန်​ ဆွဲ​ဆောင်​ အား​ကောင်းလှတဲ့ ​ကြေးရုပ်​​တု​လေး တစ်​ရုပ်​ဖန်​တီးခဲ့သူ ကိုယ်​တိုင်​ ဘယ်​​တော့မှ မ​ရောင်းချင်​ ခဲ့တဲ့ ဂန္တဝင်​​မြောက်​ အလွမ်းသင့်​ ရုပ်​တုနာတာလီ ဟာ မိန်းမတစ်​ဦးရဲ့ ​ကောက်​​ကြောင်းအလှ ကို ​ဖော်​ကျူး ​နေတဲ့ ရုပ်​တုနာတာလီ ရဲ့ ​နောက်​ကွယ်​မှာ ဘာ​တွေ ဖြစ်​ပျက်​ခဲ့တယ်​ နာတာလီ ကို ဘယ်​သူ​တွေ ဖန်​တီးခဲ့တယ်​ ဆိုတာ ဖန်​တီးခဲ့သူက လွဲပြီး ဘယ်​သူမှ မသိနိုင်​ပါဘူး။တကယ်​​တော့ နာတာလီ ဟာ အချစ်​သက်​​သေ တစ်​ခု တကယ်​​တော့ နာတာလီ ဟာ လူသားနှစ်​ဦး ရဲ့ အချစ်​ရမ္မက်​​တွေကြား ​မွေးဖွား လာရတဲ့ ရုပ်​တုနာတာလီ ဟာ အချစ်​သက်​​သေ အလွမ်းရဲ့မြစ်​ဖျား တကယ်​​တော့ နာတာလီ ဟာ လှိုက်​ဖို ရင်​ခုန်​ ခံစားရခြင်း ရဲ့ အ​ကြောင်းရင်း တကယ်​​တော့ ...
[18+] Natalie (2010)
[18+]The Awkward Moment (2014) ဒီကားက​တော့2014ကထွက်​ခဲ့တာRomantic/Sex Comedyအမျိုးအစားဇာတ်​လမ်းတစ်​ပုဒ်​​ဗျ။IMDB rating 5.1/10ရရှိထားတဲ့ဒီကားကအ​တော်​​လေးကြည့်​​ပျော်​တဲ့ကားတစ်​ကားလို့ဆိုရမှာပါ။ဒီဇာတ်​လမ်းထဲမှာမင်းသားZae Efronကအဓိကဇာတ်​​ဆောင်​Jasonအဖြစ်​၊Miles Tellerက Daniel၊Michael B JordanကMickyအဖြစ်​တို့နဲ့အတွဲညီညီပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားကြတယ်​​ဗျ။Zae FronဆိုတာHigh School Musical ဇာတ်​လမ်း​တွေနဲ့နာမည်​ကြီးတဲ့မင်းသား။ဆယ်​​ကျော်​သက်​​တွေအကြိုက်​ဆိုပါ​တော့ဇာတ်​လမ်းအသွားက​တော့Jason၊Daniel၊Mickyဆိုတာကညီအကို​တွေလိုအရမ်းချစ်​ကြတဲ့သူငယ်​ချင်း​တွေ။Jasonရယ်​Danielကပုံနှိပ်​တိုက်​တစ်​ခုမှာစာအုပ်​အဖုံး ဒီဇိုင်​နာ​တွေအဖြစ်​ အတူတူအလုပ်​လုပ်​​နေကြတာ​ဗျ။Micky က​တော့ ​ကောလိပ်​ပြီးကတည်းကလက်​ထပ်​ပြီးသား​ဒေါက်​တာတစ်​​ယောက်​​ဗျ။တစ်​​နေ့​တော့Mickyရဲ့ချစ်​ဇနီးကကွာရှင်းခွင့်​​တောင်းလို့ကွာရှင်းလိုက်​ရတယ်​။အရမ်းချစ်​တဲ့သူငယ်​ချင်းသုံး​ယောက်​က ဘာ​တွေပဲဖြစ်​ဖြစ်​သူတို့​တွေsingleအဖြစ်​ပဲ​နေကြမယ်​ဆိုပြီး​လေး​လေးနက်​နက်​ကတိထားထားကြပါပြီးMickyစိတ်​​ပြေလက်​​ပျောက်​ဖြစ်​​အောင်​လို့ဆိုပြီးBarတစ်​ခုမှသွားကဲကြ​ပါ​လေ​ရော။အဲ့ညမှာပဲ​ကောင်​မ​လေး​တွေနဲ့အသီးသီးငြိလာ​ရော​ဗျ။အဲ့ဒီ့​နောက်​မှာ​တော့သူတို့​တွေFriendshipနဲ့Relationshipအကြား ဘယ်​လိုလွန်​ဆွဲကြမလဲ။အမြဲတမ်း​ပေါ့ပျက်​ပျက်​​နေတဲ့Jasonတစ်​​ယောက်​က​ရောအဆင်​​ပြေနိုင်​ပါ့မလားဆိုတာကိုဆက်​လက်​ကြည့်​ရှုဖို့တိုက်​တွန်းလိုက်​ပါရ​စေ။​အော်​!!!စကားမစပ်​...ဒီကားမှာJasonတစ်​​ယောက်​``MTV Movie Award for Best Shirtless Performance´´ဆုကိုရရှိသွားတယ်​​ဗျ။R-13ကားဖြစ်​တဲ့အတွက်​ က​လေး​တွေနဲ့အတူတစ်​ကွမကြည့်​ရှုဖို့​တော့တိုက်​တွန်းလိုက်​ပါရ​စေ။Everybody Haveanice dayပါ။.(ဇာတ်ကားအညွန်းရေးသူကတော့ စိတ်ကောက်နတ်သမီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
[18+]The Awkward Moment (2014)